Maxaa cusub oo lagu soo kordhiyay Telefishinka BBC Somali? - BBC News Somali
Maxaa cusub oo lagu soo kordhiyay Telefishinka BBC Somali?
Maalinta ee berrito ee 30-ka bisha Luulyo waxaa telefishinka BBC News Somali uu noqon doonaa 30 daqiiqo.
Barnaamijka cusub oo loogu magac daray barnaamijka raadiyaha ee Caawa iyo Caalamka, waxa uu ka iman doonaa Istuudiyaha cusub ee London oo leh farsamadii ugu dambeysay - kaasi oo aad kaga boggan doonto wararka iyo dhacdooyinka caalamka kuwii ugu dambeeyay.
Haddaba, Farxaan Maxamed Jimcaale, oo ah tifaftiraha barnaamijka telefishinka BBC Somali, ayaa waxa uu uga warramay Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil isbeddelka cusub ee lagu sameeyay Telefishinka BBC Somali iyo wararka iyo doodaha xiisaha leh ee daawadayaashu kala socon karaan maalin walba Isniin ilaa Jimco.
BBC News Somali waxay ku gaartaa toddobaadkii ilaa 3.6 milyan oo qof oo ku nool Bariga Afrika, Geeska Afrika iyo Caalamka oo dhan - radio (oo ah idaacadda caalamiga ah ee loogu dhageysi badan yahay Soomaaliya), online iyo TV iyo weliba bogagga bulshada Twitter, Facebook iyo Instagram.
BBC World Service waxay ku soo gudbisaa wararka caalamka Ingiriis iyo 41 luqadood oo kale, kuwaasi oo ku baxa raadiye, telefishin iyo digital, waxaana toddobaadkiiba dhageysta ama daawada 279 milyan
Maqal Siduu ku billowday dagaalkii qaraarnaa ee Iiraan iyo Ciraaq dhexmaray 1980?
Siduu ku billowday dagaalkii qaraarnaa ee Iiraan iyo Ciraaq dhexmaray 1980?
Maqal Maxay salka ku heysaa diidmada Talyaaniga ee dadka qaxootiga ah?
Maxay salka ku heysaa diidmada Talyaaniga ee dadka qaxootiga ah?